Ciidammada ammaanka Soomaaliya oo soo af-jaray weerarkii hoteel SYL | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidammada ammaanka Soomaaliya oo soo af-jaray weerarkii hoteel SYL
Laamaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa soo afjaray weerar dabley ka tirsan Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen Hoteelka SYL ee magaalda Muqdisho.
War-saxaafadeed ka soo baxay booliska ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen shan qof oo isugu jira saddex rayid ah iyo laba askari ka tirsan ciidammada ammaanka.
War-saxaafadeedkaasi boolsiak ayaa sidoo kale lagu sheegay in la dilay dhammaan raggii dableyda ahaa ee weerarkaasi soo qaaday, kuwaa oo tiradoodu uu booliska ku sheegay shan nin.
Booliska ayaa intaasi ku daray in la soo badbaadiyay dad kor u dhaafaya 80 qof oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa hoteelkaasi la weeraray.
Dadkaasi la soo badbaadiyay waxaa ka mdi ahaa mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Weerarkaasi ayaa waxaa mas’uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab.
Hoteelka la weeraray ayaa u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Sida ay sheegtay taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sareeyo Guuto Zakiya Xuseen Axmed, weerarka ayaa billowday 7-dii fiidnimo ee xalay, waxaana ilaa xilli dambe la maqlayay dhawaqa rasaasta ay is-weydaarsanayeen ciidammada ammaanka iyo dableydii weerarkaasi soo qaaday.
Weriyaha BBC-da ee Muqdisho ayaa sheegaya in weerarkan xalay uu aad uga duwanaa kuwii hore ee Muqdisho ay ka geysan jireen Al-Shabaab, kuwaa oo lagu bartay in ay ku billowdaan baabuur ismiidaamin ah. Balse weerarkii xalay ee hoteel SYL ayaa ahaa mid sida la sheegay ay soo qaadeen rag ku lebbisnaa dareyska ciidamada oo markii ay gudaha u galeen hoteelka rasaas ku billaabay ilaalada hoteelka.
Booliska Soomaaliya ayaa qoraal la soo dhigay bogga Facebook ee taliye ku xigeenka booliska Zakiya Xuseen Axmed waxa ay ku sheegeen in “Abbaaro 7-dii fiidnimo (7pm) ayaa qoladii nabad diidka ah weerar ku soo qaadeen hotel SYL iyadoo 2 ka mid ah lagu dilay hotelka banaankiisa sidoo kalena labo kale haatan ay ciidamada amaanka kula dagaallamayaan gudaha Hotelka. “Ilaa iyo hadda waxay Ciidamada Ammaanka soo badbaadiyeen 82 qof ay isku jira shacab iyo masuuliyiin. Waxaan ka digeynaa in xiriir telefoon lala sameeyo dadka shacabka ah ee lagu tuhunsanyahay in ay gudaha ku jiraan inta hawl galka laga soo afjarayo”.
Booliska ayaa xilligaasi ugu baaqay warbaahinta iyo shacabkuba in ay ka fogaadaan goobta uu weerarka ka socdo sababo ammaan awgood.
Hoteelkan oo oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa caan ku ah inay dagaan mas’uuliyiinta sar-sare ee dowladda, waxaana la sheegayaa in ay dad badan ku sugnaayeen xilligii la weerarayay.
Dad goob joogeyaal ah oo weerarkaasi ka badbaaday ayaa BBC-da u sheegay in ay ka boodeen darbiyada dambe ee hoteelka balse ay maqlayeen rasaas iyo qaraxyo.
Xildhibaan Mahad dhoorre oo ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka maamulka Koonfur-galbeed, oo ka soo badbaaday weerarkaasi ayaa la hadlay BBC-da.
“Annagoo meesha ku sugeynaa adaanka salaadda cishe ayaan mar qura maqalnay rasaasta. Ma garaneynin cidda xabadda rideysay, waan wada argagaxnay. Indhaheygu waxay qabteen raggii rasaasta ridayay, waxaan gudaha ugu cararnay hoteelka, islamarkiina waxaa noo suurtagashay inaan kasoo baxsanno”, ayuu yiri.
Waa weerarkii ugu horreeyay ee Muqdisho ka dhaca muddo 5 bilood gudahood ah, amniga caasimadda ayaana muddooyinkii dambe u muuqday mid soo hagaagayay.
Hoteelka SYL ayaa horay loogu bartilmaameedsaday weerarro noocan ah, oo khasaare weyn sababay.
22 ruux ayaa lagu dilay weerar dabayaaqadii bishii August ee 2016-kii lagu qaaday hoteelkan oo amnigiisa si weyn loo adkeeyo.
Weerar kale oo lagu bartilmaameedsaday isla hoteelka SYL ayaa dhacay bishii February ee sanadki 2016-kii.
Previous articleDawladda Hoose ee Berbera oo beertay 1500 oo geed
Next articleFaysal-Waraabe oo Guddoomiyaha Maxkamadda sare ku eedeeyay inuu la safanyahay Madaxweynaha